Debanye maka Myspace ọhụrụ - Nzọụkwụ site Nzọụkwụ Ntuzi
Media Social Netwọk mmekọrịta
Ọ dị mfe ịdebanye aha maka Myspace wee malite iji ụdị egwu ọhụrụ, nke a na-echegharị egwu egwu na-adabere na 2013. Nke a bụ otu esi eme ya na ntinye ngwa ngwa.
Debanye aha maka Myspace ma mụta otú New Version si arụ ọrụ
Myspace.com nbanye ihuenyo. © Myspace
Maka Myspace ọhụụ ọhụrụ, pịa bọtịnụ "Jikọọ" na ibe Myspace.com na ị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ maka otu esi esonye ma ọ bụ jiri saịtị ahụ:
Site na Facebook ID
Site na Nyocha Twitter gị
Mepụta aha aha njirimara na paswọọdụ naanị maka Myspace
Ọ bụrụ na ị bụrịrị onye ọrụ nke Myspace, ị nwere ike ịbanye na email ochie na paswọọdụ gị.
Iji mepụta NJ ọhụrụ, Myspace na-arịọ maka aha zuru ezu gị, email gị, okike, na ụbọchị ọmụmụ gị (ị ga-abụrịrị ọ dịkarịa ala afọ 14). A na-arịọ gị ka ịmepụta aha njirimara nke ihe odide 26 na paswọọdụ n'etiti mkpụrụ okwu 6 na 50.
Mgbe i mejupụtara ụdị, pịa igbe na-ekwenye na usoro okwu ọhụrụ ahụ wee pịa bọtịnụ "Jikọọ".
Kwenye nhọrọ gị ma ọ bụrụ na a jụrụ gị, pịa "sonyere" ma ọ bụ "na-aga n'ihu."
Họrọ Ọnọdụ Myspace gị
Ihuenyo maka ịhọrọ ọrụ Myspace. © Myspace
Ị ga-ahụ otu ọrụ dị iche iche ị nwere ike ịchọta, dị ka "onye ofufe," ma ọ bụ "DJ / Producer" ma ọ bụ "onye ọkpọ."
Lelee ndị na-emetụta gị wee pịa "nọgide".
(Ma ọ bụ pịa "gbanye nzọụkwụ a" ma ọ bụrụ na ịchọghị itinye ihe ọ bụla n'ime ọrụ gị na njirimara Myspace gị.)
Mepụta Mmasị Mmasị Ọhụrụ gị
Profaili Myspace ọhụrụ. © Myspace
Na-esote usoro ntinye aka Myspace ọhụrụ, ị ga-ahụ ihuenyo ahụ n'elu na ọkọlọtọ mara mma n'elu ya. Nke a bụ profaịlụ Myspace gị.
Ịnwere ike ịgbakwunye foto gị, foto ihe mkpuchi, dee nkọwa ma ọ bụ "banyere m" gụkwuo, ma nwee ohere ịgbakwunye ma ọdịyo na vidiyo.
Nhọrọ nzuzo gị dị ebe a kwa. Nkọwapụta gị bụ ọha na eze site na ndabara. Ị nwere ike iji ya site na ịpị "profaịlụ a kpachibidoro."
Jikọọ na Ndị mmadụ na ndị Artists
Ihuenyo maka netwọk njikọ. © MySpace
Ọzọ, Myspace ga-akpọ gị ka ị pịa "Gaa", ebe ị nwere ike ijikọta ndị mmadụ na ndị ọkpụkpọ.
Ogwe ihe nchọgharị dị na ekpe ga-enye gị ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ iji wuo, hazie ma welie ahụmịhe Myspace gị. Pịa na "Chọpụta" iji nweta nyochaa ihe ọhụrụ ma dị ọkụ, na ịmalite ịchọta egwu iji egwu ma kesaa.
Kedu Ihe Myspace Na-achọ Tab?
Myspace disocver ​​page. © Myspace
Ihe ngosi Discover na-egosi gị ozi ọma banyere abụ ndị a na-ewu ewu, egwu ndị ọzọ, ìgwè na ndị na-ese ihe. Ọ na-egosiputa foto buru ibu ma na-eji ntanye akwụkwọ mpịakọta na-enweghị atụ. Enwere bọtịnụ "redio" nke na-enye gị ohere ịnye egwu na ụdị ewu ewu.
Ị nwere ike ịlaghachi na ibe gị mgbe niile site na ịpị ibe Myspace na aka ekpe dị n'akụkụ aka ekpe n'akụkụ ntụpọ ntụpọ, na-esote aha gị.
Njikwa egwu egwu dị n'ebe ahụ, na-ekwe ka ị gee egwu ndị a ma ama na "ụlọ redio."
Ịnwere ike ịchọọ maka ndị agha na ndị na-ese ihe ma sorokwa ha.
Ụlọ Myspace New Myspace
Myspace ebe obibi ọhụrụ. © Myspace
Myspace ebe obibi gị ga-ele obere ihe anya ruo mgbe i jikọtara ụfọdụ ndị na-ese ihe, ndị agha ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ nbudata mmelite na elu nke ibe ahụ dịka ozi ndepụta ozi Facebook ma ọ bụ mmelite mmelite site na njikọ gị na LinkedIn na netwọk mmekọrịta ndị ọzọ.
N'okpuru ala nke ibe gi bu ihe igodo egwu egwu gi, "oche" gi dika Myspace na-akpọ ya.
Ihe Ụkwụ FTW na Otu esi eji ya
Kedu ihe IMY pụtara?
Mepụta Google Account maka Gmail, Drive, na YouTube
Esi esi na PlayStation Sony 4
Iji Emoji na IPhone
Kedu 'NIMBY'? Kedu ihe mmechi nke a pụtara?
Kedu ihe bụ 'UMADBRO'? Ọ bụ Otu ka 'Ị Mad' na 'Ọ Mad'?
Otu esi eji YouTube
9 Ntọala Ntanetị Ịntanetị Nyocha
Akwụsịla m! Ugbu a Gịnị?
Esi ewepụ Ntọala Mgbado 3D
Ugbo ala eletrik asatọ kacha mma iji zụta na 2018
The 6 Best 'I Miss You' Memes
ICloud Mail IMAP na SMTP Ntọala
Ndụ nke Jack Tramiel Nkebi nke 4 - Atari Commodore War
4 Akụkụ nke Ngosipụta Ọganihu
Nke a bụ ihe mere Apple TV 4 Egwughị 4K
Otu esi eji AutoFill na Safari maka OS X na MacOS Sierra
The 24/7 okporo ụzọ gbasara mkpokọta izu akpa Review
Nyochaa Nhọrọ Google
My iphone agaghị ebu! Kedu ihe m ga-eme?
Ọnọdụ Minecraft: Ha Na-arụ Ya?
Kedu ihe Njikwa AAF?
GTA 3 Ndị aghụghọ maka PlayStation 2
Foto ndị dị na Photoshop Layer na Shepby Kate Schmitz
Ntughari Ntughari kacha mma na Home Network
Gịnị Mere Ndị Nkwọrọ Okwu Na-eji Gbasaa?
Gịnị bụ Shovelware?
Esi eji Apple Music na iPad
Họrọ Audio n'ime na site na Ogwe Nrụpụta Mac gị
Ihe isii kachasị mere Bluetooth gị agaghị ejikọ